Wararka Maanta: Sabti, Jan 8 , 2022-Xisbiga Waddani "Buuni markii uu halkan yimid wuxuu ahaa magangalyo doon"
Dhamme ayaa sheegay in Buuni uu la shaqayn jiray xaaska madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sh. Maxamuud, isagoo ku eedeeyay in uu falal musuq maasuq gaystay intii uu howshaa ku jiray.
"Buuni markii dalka tacabka la galinayay dalka inalamuu joogin, waxa uu ahaa xoghayaha gaar ka ah ee marwada madaxweynahii hore ee Soomaaliya Xasan Sh. Maxamuud, oo markaa ka shaqaynaysay mashruucii agoomaha ee Jubooyinka, mashruucaas oo musuq badani markii danbe ka yimid" ayuu yidhi Dhamme.
Dhamme ayaa Buuni ku eedeeyay in uu Borama yimid isagoo eedaysane ah oo magangalyo doon ah, isla markaana uu Faysal Cali Waraabe magan galiyay.
"Buuni markii uu halkan yimid wuxuu ahaa magangalyo doon oo isaga oo dhuumanaya ayuu soogalay Borama, xiligaas oo uu eedaysane caalami ah ahaa, Faysal Cali Waraabe ayaa magangalyo siiyay, abaal buu ugu hayn lahaa" ayuu yidhi.
Jawaabta Dhamme ayaa timid kadib, markii uu afhayeen Buuni marar badan ku cel celiyay in uu Somaliland uga tacab badanyahay madaxda xisbiga Waddani.